Football Khabar » कोपा अमेरिका : पेनाल्टीमा कोलम्बियालाई हराउँदै चिली सेमिफाइनलमा !
कोपा अमेरिका : पेनाल्टीमा कोलम्बियालाई हराउँदै चिली सेमिफाइनलमा !
निर्धारित ९० मिनेटभित्र आफूले गरेका २ गोल भिएआरबाट रद्द भएपछि पेनाल्टीमा धकेलिएको खेलमा कोलम्बियालाई हराउँदै साबिक विजेता चिली ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ । आज बिहान भएको तेस्रो क्वार्टरफाइनल खेलमा चिलीले कोलम्बियालाई पेनाल्टी सुटआउटमा ५–४ ले निराश बनायो ।
त्यसअघि निर्धारित ९० मिनेटमा दुवै पक्षबाट गोल नभएपछि खेललाई सोझै पेनाल्टी सुटआउटमा लगिएको थियो । जहाँ चिली भाग्यमानी भयो । त्यसअघि चिलीले खेलमा २ गोल गरे २ वटै भिएआरबाट रद्द गरिँदा कोलम्बिया भाग्यमानी ठहरिएको थियो । तर, पेनाल्टीमा उसलाई भाग्यले साथ दिएन ।
पेनाल्टी सुटआउटमा दुवै टिमका सुरुआती ४ जनाले गोल गरेका थिए । जसमा कोलम्बियाका लागि हामेस रोड्रिग्वेज, एडविन कार्डोना, जुआन क्वाडराडो र येरी मिनाले गोल गर्न सफलत भए । यता, चिलीका लागि आर्टुरो भिडाल, एदुआर्डो भार्गास, एरिक पुल्गार र चाल्र्स अरन्गीजले पनि गोल गरेपछि ४–४ मा पुग्यो ।
तर, कोलम्बियाका लागि पाँचौं पेनाल्टी हानेका विलियम टेसिल्लोले प्रहार पोस्टबाहिर गएपछि चिलीलाई राहत मिल्यो । त्यसपछि एलेक्स सान्चेज टिमका लागि अन्तिम र विजयी पेनाल्टी हान्न आए । र, सजिलै गोल गर्दै टिमलाई ५–४ को जित दिलाउँदै सेमिफाइनलको बाटो देखाए ।
त्यसअघि ९० मिनेटभित्र चिलीले २ गोल गरेका थियो । उसका लागि चाल्र्स अरन्गीज र आर्टुरो भिडालले गोल गरे पनि भिएआरबाट दुवै गोल रद्द गरिँदा चिलीलाई ठूलो झट्का लागेको थियो । खेलमा केही तनावपूर्ण अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो । तर, पेनाल्टीमा चिलीले नतिजा खोसेरै छाड्यो ।
यसअघि कोलम्बियाले समूह चरणमा ३ वटै खेल जितेर शानदार प्रदर्शन गरेको थियो । तर, चिलीसँग उसले आफ्नो लयमा प्रदर्शन गर्न सकेन । खेल अवधिभर चर्को दबाब झेलेको उसले कम मात्रै गोलका अवसर बनायो ।
अब चिलीले सेमिफाइलनमा अन्तिम क्वार्टरफाइनलमा उरुग्वे र पेरुबीचको खेलको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । यसअघि एक सेमिफाइनलमा खेल्ने आयोजक ब्राजिल अर्जेन्टिनाको टुंगो लागिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति १४ असार २०७६, शनिबार ०१:४५